Umatshini weLathe Lensimbi uyathengiswa, i-CNC, iNcwadi, uMenzi wase China kunye noMthengisi
Ulapha: Ekhaya1 / Umatshini wentsimbi yeLathe uyathengiswa
Ukuba ufuna ukucwangcisa ibar okanye uhlobo lwediski eyintsimbi, ukufumana umphezulu ongaphandle oqaqambileyo, ukuqhubekeka ngentambo ngaphandle kwebar ejikelezayo, ukuqhubekeka umngxunya ongaphakathi, okanye ukuqhubekeka nobuso bokugqibela ukwenza isiphelo sobuso ngakumbi, emva koko lathe yethu metal lukhetho elungileyo. I-Metal Lathes isetyenziswa ngokubanzi ekusetyenzisweni kwesinyithi, ukuthunyelwa, ipetroleum, imoto, imigodi yamalahle kunye nezinye iinkalo.
Xa kufikwa kukhetho lomatshini we-lathe, ixhomekeka ikakhulu kubude, ubungakanani, ubunzima kunye nemowudi yokulungiswa kwendawo yokusebenza. Lathe Tye, lathe nkqo kungakhethwa. Ukuba imveliso mass, ozikhethelayo cinga CNC lathe, kodwa ukuba inani workpiece processing incinci kakhulu, ngoko lathe CNC is a bit of a waste, ungakhetha lathe manual. Umgangatho wethu lathe uzinzile, ukusuka kumthombo wolawulo lokuthengwa kwempahla, iinkcukacha ezipheleleyo. Imibuzo yamkelekile.
Cnc umatshini lathe
Ukujikeleza kwe-servo motor kulawulwa yinkqubo ye-CNC, ukutya okuzenzekelayo, okulungele ukucwangciswa kwebhetshi
Nkqo umatshini lathe
Indawo yokusebenza ijikeleza ngokuthe tyaba kwaye umsiki unyuka esihla. Kufanelekile ukuba workpiece kunye ubunzima enkulu kunye ubukhulu
Heavy umsebenzi lathe umatshini
Lathe othini ngokusebenzisa umngxuma mkhulu kakhulu, ubude bokusebenza bunokuba ngaphezulu kweemitha ezili-10, bunokumelana nobunzima bomsebenzi obufikelela kwiitoni ezininzi.
Umbhobho threading umatshini lathe
Ifanelekile ukujija imibhobho enobubanzi obude kunye nobukhulu, indawo yokuluka nayo inkulu kakhulu
Umatshini lathe Manual
Ulawulo Manual of feed kunye nohlengahlengiso, ezilungele non-ibhetshi processing
Faka isali esusekayo kwindawo yokulala, wandise idayimani yokujika yohlobo lwediski yomthi
Utyibilike umatshini lathe embi
Umzimba webhedi unekona ethile yokuthambeka, ukubhobhoza i-chip ngokufanelekileyo
Yongeza intloko amandla kunye C axis kwi lathe for yokugaya kunye kusombiwa, kakhulu ezenzekelayo
Umatshini lathe Small
Ilungele ukusebenziseka kancinci, ixabiso elincinci, ubunzima bomsebenzi oziikhilogram ezilikhulu
Ngokutsho imo yolawulo, lungohlulwa lube CNC eziqhelekileyo
Ngokwe-Angle ye-bedstead, inokwahlulwa ngokwendawo yokulala ethambekileyo yoxolo
Ngokutsho isihlalo, zingahlulwa zibe lathe isihlalo kunye lathe eziqhelekileyo
Umatshini we-lathe yensimbi luhlobo lwesixhobo somatshini wokusika wesinyithi, esisetyenziswa ngokubanzi, sinokujikwa, umngxuma, kunye nokuphela.
Xa ubude machining akwanelanga, le workpiece ungagqitha umngxuma iziko yokuluka ukwandisa uluhlu machining le lathe. Oku kufuna ubungakanani be-spindle emngxunyeni ukuze bube bukhulu kunobubanzi be-workpiece.
Umzi mveliso weemoto
Kutheni lathes ziyingozi kangaka? Incwadana yokuPhepha yokuSebenza koMbane.
I-lathes zizixhobo eziqhelekileyo zomatshini, ezisetyenziswa ngokubanzi ekusetyenzisweni kwesinyithi. Kuyingozi kakhulu ukuba i-lathe ayisetyenziswanga kakuhle.
I-Lathe sisixhobo esinzima somatshini wokulungisa isinyithi, umzimba wenziwe ngentsimbi. Ngokwesiqhelo ubunzima obungaphezulu kwe-1 ton, ukuba i-lathe enkulu, ubunzima bunokufikelela ngaphezulu kweetoni ezilishumi. Xa i-lathe imile, kulula kakhulu ukwenzakala ukuba umntu okufutshane ngengozi uwile kwaye wachukumisa i-lathe.
Xa i-lathe iqala ukubaleka, isantya sokujikeleza esijikelezayo siqhuba into yokusebenza ukuze ijikeleze, ukuba ingozi ye-chuck, emva koko uzipho luye luphume ngaphandle, kulula ukukhokelela ekonzakaleni kakhulu, kungekho ngaphantsi kwengozi yemoto. Okanye iinwele ezinde zomntu, imikhono, ukuba ayilungelanga kakuhle, kulula nokuzibandakanya noomatshini.
Umbane osetyenziswa lilothe ngumbane oshishino ngokubanzi, ukuba kukho ingozi yokuvuza kombane, kukho umngcipheko wokothuka kombane.
I-1 kufuneka yazi ukusebenzisa i-lathe, ukuba i-novice, kufuneka ibe namava ekusebenzeni kwabasebenzi ecaleni kwesikhokelo, kungenjalo ayivumelekanga ukuba isebenzise i-lathe.
2 naka ukunxiba, kufuneka uqinise ikhafu, iimpahla azivunyelwe ukuba zibenomsonto, okanye ibhanti yelinen elijingayo. Akukho ziiglavu, akukho makhonkco nakubukela. Nxiba izikhuseli zamehlo rhoqo.
Unikezelo lwamandla olu-1, kufuneka luqinisekise ukuba akukho kuvuleka kombane, ucingo olusezantsi lumiswe kakuhle
2 Icandelo ngalinye lokuthambisa kufuneka libe neoyile
I-lathe kufuneka iyeke ukusebenza xa ukothula indawo yokusebenza okanye ujonge ukuchaneka kwendawo yokusebenza
I-4 hen lathe iyasebenza, abasebenzi kufuneka bagcine umgama othile ukusuka kwi-lathe
5 Xa i-lathes ezininzi zisecaleni, thambeka kwi-Angle ethile
6 Sukusebenzisa izandla zakho ukucoca iifilitha zentsimbi
Ngaphambi komsebenzi we-lathe, qinisekisa ukuba i-chuck itshixiwe, qinisekisa ukuba i-workpiece iyaxinwa
8 Phambi kokuba ulayishe kwaye ukothule i-lathe enzima, isiqwenga somthi kufuneka sibekwe phakathi kwendawo yokusebenza kunye nesiporo sikaloliwe ukunqanda loo msebenzi ukuba ungawi ngengozi
Yintoni umahluko phakathi umatshini cnc lathe kunye umatshini lathe manual?
Umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini yindlela ezilawulwa ngayo.
Imowudi yolawulo lwe-lathe ye-CNC: Inkqubo ye-CNC-isilawuli-i-servo motor
Umqhubi uya kufuna ukusika inkqubo esebenzisa inkqubo yekhowudi ye-G, engeniswe ngaphakathi kwinkqubo ye-CNC ye-lathe, i-lathe iya kuqonda ukuqhubekeka okuzenzekelayo kwendawo yokusebenza, ngaphambi kokugqitywa, akukho kungenelelo ngoncedo kwakhona.
Imowudi yolawulo lwe lathe yesiqhelo: kufuneka isebenze ngesandla, ayinakulungelelaniswa, ngakumbi ayinakulungiswa.
Ngaba ufanele unxibe iiglavu xa usebenzisa i-lathe?
Ayisiyo kuphela ukunxiba iiglavu, izihlangu zokunxiba iimpahla zomsebenzi, ii-cuffs bopha, iinwele ezinde ukunxiba ikepusi yokukhusela, musa ukunxiba iiglavu, umsebenzi wokusika kunye nokulola kufuneka unxibe iiglasi.
Ukuba usebenzisa i-lathe eqhelekileyo, kukho ezi zizathu zilandelayo:
Le lathe ayivalelwanga ngokupheleleyo, kwaye abasebenzi kufutshane workpiece,
Jikelezisa ivili lesandla rhoqo,
3 ngesandla ukhulule okanye utshixe i-chuck
I-lathe ithembele kumbane wamandla aphezulu ukuqhuba i-spindle ukujikeleza ngesantya esiphezulu kwaye usebenze ngeiglavu, ke kulula kakhulu ukubambeka okanye ukubambeka ngoomatshini.
Ungasikhetha njani isixhobo esifanelekileyo se lathe
Le miba ilandelayo kufuneka ithathelwe ingqalelo xa ukhetha uhlobo lwesixhobo:
(1) Ngokuqhubekekayo ukulungisa imiphezulu emininzi kangangoko ngexesha elinye;
(2) Kwinkqubo yokusika, isixhobo asinakuphazamisana nentaba yokusebenza;
(3) Ngaba ukuphucula ukusebenza machining kunye nomgangatho umphezulu;
(4) Amandla esixhobo esinengqiqo kunye nokuqina.
1. Uhlobo lokujika isixhobo
Lathe CNC ngokubanzi isebenzisa uqinisa isixhobo standard indexable. Iblade kunye nomzimba wesixhobo esinokuchaphazeleka banemigangatho. Izixhobo zeblade zenziwe ngesamente, i-carbide edityanisiweyo kunye nesinyithi esikhawulezayo.
Ngokwemisebenzi eyahlukeneyo, inokwahlulwa ibe ngumsiki ojikelezayo, umsiki wangaphandle osikiweyo, umsiki wokusika wangaphakathi, umsiki wokusika, ukusika umngxunya wokufaka umngxunya (kubandakanya indawo yokumba umngxunya, umsiki okruqulayo, impompo, njl.
Xa isixhobo esine-indexable sisetyenziselwa ukulungisa i-blade engalawulekiyo, ihlala yamkela isakhiwo se-screw, iplate yokucinezela, i-screw pin okanye i-wedge.
2. Khetha izinto zeblade
Zimbini iintlobo zezixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukujika isantya esiphezulu sentsimbi kunye necarbide yesamente.
Isantya esiphezulu sentsimbi sihlala singenanto, ukomelela kwayo kubhetele kune-cemented carbide, kwaye ubunzima bayo, ukunxiba ukuxhathisa kunye nokuqina okubomvu kubi ngakumbi kune-carbide yesamente. Akulungele ukusika izinto ezinobunzima obuphezulu kunye nokusika ngokukhawuleza. Isantya esiphakamileyo izixhobo zokusika iintsimbi kufuneka zilolwe ngumenzi ngaphambi kokusetyenziswa, kwaye ukulola kufanelekile, kufanelekile kuzo zonke iintlobo zezixhobo zokusika ezingekho mgangathweni ezineemfuno ezizodwa.
Ukufakwa kwe-carbide eqinisiweyo kunokusebenza kakuhle kakhulu kwaye kusetyenziswa kakhulu ekujikeni kwe-NC. Ukufakwa kwe-carbide eqinisiweyo kunemigangatho yokulinganisa esemgangathweni, kwaye iiparameter ezithile zobuchwephesha kunye nokusika ukusebenza kubonelelwa ngumenzi wesixhobo.
Ngokomgangatho wamazwe aphesheya (i-ISO), ii-carbide ezifakwe kwisamente zahlulwe zangamacandelo amathathu: i-p-intsimbi, i-m-insimbi kunye ne-k-cast iron esekwe kubulukhuni kunye namandla okugoba i-carbide yesamente. Amanani ka-01, 05, 10, 20, 30, 40 no-50 adityaniswa emva kweekhowudi zika-K, P no-m zolwahlulo-hlulo. Ngokubanzi, inani elincinci lincinci, kokukhona ubunzima buphezulu, kodwa ezantsi ubunzima; ngokuchaseneyo, inani elikhudlwana, kokukhona ubukhuni buphezulu, kodwa okukhona ubunzima busezantsi.
Ukongeza, kukho izixhobo zesixhobo sobunzima kunye nokunxiba ukumelana ngaphezulu kwe-carbide yesamente, ezinje ngeeseramiki, i-nitride ye-cubic boron kunye nedayimane.
Ukugcinwa komatshini weLathe kunye nohlengahlengiso
Xa usebenzisa umatshini we-lathe, kufuneka kulandelwe imiyalelo elandelayo:
1) Ilever lever kuzo zonke iitanki zeoyile kufuneka ihlale igcinwe kwiziko legeyiji yeoyile; Ngaphandle koko kuya kuthambisa ukuthambisa okungafunekiyo okanye ukugqithisa kobushushu kunye nelahleko yamandla kuyakwenzeka.
2) Zonke iindawo zokuthambisa kufuneka zithanjiswe ngeoyile esulungekileyo rhoqo.
3) Rhoqo jonga ukuhamba kweoyile ngeglasi yokubona uqinisekisa ukuthambisa okufanelekileyo kwentloko kunye nebhokisi yokutya.
4) Jonga ulungelelanise uxinzelelo lweebhanti zeemoto rhoqo.
5) Phambi kokusebenza kwemihla ngemihla, sebenzisa i-motor engasebenziyo umzuzu omnye, emva koko usebenze onke amalungu e-lathe ngaphandle komthwalo, gcwalisa ioyile kwindawo yokuhlamba ioyile.
6) Xa othini ohamba ngesantya esiphezulu, utshintsho ngesiquphe id isantya akuvumelekanga.
7) Isikrini esisisikhokelo sisetyenziselwa umsonto kuphela. Ungaze uyisebenzisele ukuguqula ukusebenza.
8) Xa ufaka isicelo sokuphumla ngokuthe ngcembe okanye ukuphumla komlandeli, indawo yokunxibelelana yokuphumla kufuneka ithanjiswe.
1). Uhlengahlengiso othini
Ukucaciswa okugqithisileyo kokuthwala okudala kubangela ukuba "ukusebenza kugqitywe kungagudisi" Ukuchaneka kokujija kokujikeleza kubandakanya ukuphuma kwe-radial kunye nokuphela kwe-axial. Ukuphuma kwe-radial kuqinisekisiwe ngokurola kabini kumqolo wentsimbi kunye nomqolo omnye weralial ibhola yokuthwala ethwele ngasemva kokuluka ngelixa i-axial run-out iqinisekisiwe ngumqolo omnye wokufaka ibhola ethwele ngasemva kokuluka. Indlela yokutshekisha ihambelana nomba 5 no-8 kwisatifikethi sovavanyo. Ukuba ukuchaneka akukho phezulu kwento ebuzwayo, kwiimeko ezininzi. Indlela yile ilandelayo: lungelelanisa i-nut kwisixhobo sokususa ekususeni ukucoca kwindawo yokuluka.Ukutshixa enye nut emva kohlengahlengiso. Ukuba ukuphuma kwe-radial akuphelelanga kwinto ebuzwayo kodwa uhlengahlengise ukubuyela umva ngenye indlela yentengiso echazwe apha ngasentla. Emva kokuba uhlengahlengiso lwenziwe, sebenzisa i-idindle idle ngesantya esiphezulu kangangeyure kwaye uqaphele ukuba iqondo lobushushu elingenakugqitha kuma-70. Ukuba iyadlula, qala ukhulule izikrufu zokutshixa kumantongomane abekiweyo, ke amandongomane kufuneka akhululwe kancinci, emva kohlengahlengiso, uphinde ubuyisele izikrufu.
2）. Uhlengahlengiso lweVili leTyathanga
Utshintsho lwesantya sokuluka lulawulwa ngamanqwanqwa ngaphambili kwentloko. Amanqanaba okulawula angatshintsha iigesi zesilayidi ngokusebenzisa indlela yevili lomxokelelwane ukufumana iimeko ezahlukeneyo zegiya. Ukuba isantya sokujija asilingani nesantya saso esikroliweyo kwisantya sokuluka esibonisa ukudayala kufuneka senze uhlengahlengiso lwendlela yevili lokudibanisa. Kuqala khulula isikrufu, vula i-eccentric shaft yenze ikhonkco de isibonisi sokutshintsha kwesantya sisetelwe kwindawo oyifunayo, emva koko, qinisa isikrufu ukuze ufumane ishafti ngeebhola zentsimbi.
3). Uhlengahlengiso lokuhamba
Ukucaca phakathi kwesilayidi esinqamlezileyo kunye nesikhombisi kwaye phakathi kwesilayidi sekhompawundi kunye nezikhokelo zihlengahlengiswa ziigibs ngokujija ngokulandelelana. Ngokwenyani yokubuyela umva kwesilayidi somnqamlezo esikhokelayo esibangelwa kukunxiba kwamantongomane ahlengahlengisiweyo, khulula iscrew kumantongomane kwaye uzobe umda ngesikere kude kube kupheliswe umva. Emva koko qinisa isikrufu.
4). Uhlengahlengiso lweTension Belt
I-motor ephambili yokuqhuba ibekwe kumlenze we-lathe. Hlaba isiciko phambi komlenze wokugqibela, uxinzelelo lwebhanti lunokuhlengahlengiswa ngokutshintsha ukutyekela kwesitya esisisiseko seemoto ngamantongomane. Uxinzelelo lwebhanti lemoto luxhomekeke kumgama ophakathi kweziko le-pulley kunye ne-pulley yesihloko sentloko.
Umatshini wokulahla uhlalutyo oluqhelekileyo, kunye neendlela zonyango
Hayi Ukumisa Izizathu Iindlela zokuCoca
1 Amandla awunakuba njalo
Ukuhamba kokutshintsha akunakuchukumiseka Vula ucango lokujija iscrew kwiswitshi, shenxisa iswitshi ngaphandle ngokufanelekileyo, emva koko uphinde uphinde ujonge isikrufu
2 Motor yokuluka ayikwazi ukubaleka Ukutshintsha kokuhamba akusetyenziswa Vula ucango lokujija iscrew kwiswitshi, shenxisa iswitshi ngaphandle ngokufanelekileyo, emva koko uphinde uphinde ujonge isikrufu
3 Ukulawula isiguquli kutshiswa Amandla ombane kumsebenzisi ahambelani nevolthi eyabelweyo. 1. Ngokwe-asayinimenti, buyisela ibhalbhu yesibane nge ”24v, 40w” enye
2. Guqula indawo yesiguquli ngokwakho.
4 Isibambo kwintloko ayikwazi
Ukufuduswa, isantya sinakho
1.The Screw ibekwe uba bhetyebhetye
2. Iplanga elibekiweyo liyaguquguquka.
1. Hlaba ipleyiti engqukuva ngesiphatho, uze uqinise isikere esimisiweyo.
2. Qinisa zombini izikrufu kwiplanga.
5 Xa yokuluka isebenza ngesantya esisezantsi, ayikwazi ukutshintsha isantya I-nut kwi-shaft eccentric, efakwe kwisilayidi sokuluka, iba bhetyebhetye. Vula isiciko esingaphezulu sentloko ujikeleze ishafti ye-eccentric enye, kwaye uthumele isiphatho kwisantya esiphezulu, isantya esisezantsi okanye indawo engenanto .Ukuba izihloko zegiya zingazibandakanya ngesiqhelo, tshixa i-nut.
6 Intonga yokuluka esentloko yentloko iqala kancinci Umsantsa wediski yokukhuhlana kwishafti I kwintloko yentloko inkulu. Emva kokuhlengahlengisa ii-disc zokukhuhlana, phakamisa i-levers control levers ukuze uyivavanye de kube i-spindle ikwimeko efanayo.
7 I-lathe iyangcangcazela xa igcuma okanye uburhabaxa bomsebenzi awufikeleli kwimfuneko. 1. Uhlengahlengiso lwe-spindle kunye nenqwelo yokuhamba ayichanekanga.
2. Iharike okanye i-angle clearance inkulu kakhulu.
3. Isixhobo sesixhobo asichanekanga.
4. Amandla e-shank awanelanga. Okanye i-cantilever inde kakhulu.
5. Ukulungelelaniswa phakathi kwesilayidi esijikelezayo kunye nesali akulunganga.
1. Lungelelanisa ngokufanelekileyo iibheringi kwisixhobo sokuluka kunye neepleyiti ezimbini zangaphambili
2. Ukusila isixhobo ngokweemfuno.
3.Khetha izixhobo ezifanelekileyo zesixhobo ngokungqinelana nezinto zomsebenzi.
4. Lungisa i ubude cantilever ka shand.
5. Isilayidi esitshintshayo.
8 Umlinganiselo we-taper womsebenzi awukho mfuneko xa umatshini usetyenziselwa ukuguqula umphezulu wangaphandle we-cylindrical. Ukufakwa komatshini akukho tye Lungisa i-lathe ngokwencwadana yokusebenza.
9 Le lathe awukwazi ukondla ngokuzenzekelayo. 1. Ilever ekhohlo kunye nasekunene ayitshintshanga ngokuchanekileyo.
2. Izixhobo zejingi ziyavela.
1. Jonga i-lever. Xa isekunene, umatshini unokutya ngokwesiqhelo, xa usekhohlo, umatshini akanakondla.
2. I-nut kwisakhelo se-swing iguquguqukayo. ukuze iijingi ezijikelezayo ziphume. Lungisa iigiya uqinise nut kwisakhelo sokujija.
10 Ifaskoti ayikwazi ukuhamba ngesantya esiphezulu 1. I fuse itshile.
2. Iqhosha alinakuqhagamshelana.
1. Tshintsha ifuse.
2. Vula isiphatho esinejubane eliphezulu ukhuphe iqhosha: lungisa ubhedu kunye neendawo zonxibelelwano. Kwangelo xesha, cinezela amanqaku, lungisa kwakhona iqhosha.
11 Ingxolo iphezulu xa umatshini usebenza. Iibheringi zitshatyalalisiwe. 1. Ukuba ingxolo yeshafti ndiphakamile emva kokuba i-motor iqale, ukuthwala ishafti ndiyatshatyalaliswa.
2. Xa uphakamisa isiphatho sokulawula ukuqhuba othini, ingxolo iphezulu, xa uphakamisa isiphatho ukuze uyeke othini, kodwa vumela eminye imikhombe ibaleke, ingxolo iphantsi. Oku kubonisa ukuba ukuthwala kwisixhobo sokuluka kuyatshatyalaliswa.
12 Kufuneka kuqatshelwe into xa ufaka i-lathe. 1. Iimoto zibaleka kwicala elinye emva kokudibanisa iingcingo. Sukutshintsha ukulandelelana kwesigaba kuyo nayiphi na imoto enye ngabom.
2. Kufuneka ulidilize iphepha elitywinwe ngeoyile kwaye ulicoce ngononophelo emva kokuba kufakwe umatshini.
3. Gcoba ioyile yomatshini nge-20 # ebusika okanye i-30 # ehlotyeni. Musa ukuyitshintsha ngeoyile yokuthambisa esetyenziswa emotweni okanye kwioyile ye-hydraulic.